यी बार जन्मने मानिसहरु हुन्छन अत्यन्तै चमत्कारी र अत्याधिक सफल, यस्ता हुन्छन यिनीहरुको स्वभाब र गुण
Posted on May 28, 2020 May 28, 2020 by Npnews
एजेन्सी । मानिसको जन्मेको समय र उसको वातावरणले उसको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । कुन बालक कुन बार र समयमा जन्मेका हुन्, उनीहरुको उक्त साइतले स्वाभाव र चरित्र निर्धारण गर्ने ज्योतिषहरुले बताउने गरेका छन् । त्यसैले कुन बार जन्मेका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् र उनीहरुको जीवनको विकासक्रम कसरी अगाडि बढेको हुन्छ । त्यसलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ ।
९. तपाईं स्ट्रेट फरवार्ड हुनुहुन्छ र सुन्दरताको प्रिय हुनुहुन्छ ।
१.शुक्रबार जन्मेका व्यक्तिको मन, दिमाग र शरिर निकै राम्रो हुने गर्दछ ।
१.शनिबार जन्मेका व्यक्ति निकै गम्भीर र जिम्मेवार हुने गर्दछन् ।
(श्रोतः विभिन्न एजेन्सीहरु )
यदि तपाईं घरको साँचो पर्समा राख्ने गर्नुहुन्छ ? यस्तो बानी छ भने तुरुन्त हटाउनुहोस् । फलामबाट बनेको कुरा, सिक्का पर्समा नराखेर सकारात्मक ऊर्जा आफ्नो पर्सलाई तान्न दिनुहोस् । – इभ्रिड़ेखबरबाट